Famonoana karana teny Tanjombato Miaramila ny 2 tamin’ireo 6 voasambotra
Lehilahy enina no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny sampana miady amin’ny heloka bevava Anosy ny 30 jona sy ny 1 jolay lasa teo.
Mpitandro filaminana am-perinasa sy efa voaroaka ny roa tamin’izy ireo. Resaka fanafihana sy fitifirana karana teny Tanjombato izy ity. Raha tsiahivina, ny 31 janoary lasa teo, nisehoana fanafihana sy fitifirana teratany karana iray teny amin’ny faritra Tanjombato ary lehilahy iray no efa voasambotra voalohany ka efa notanana eny am-ponja. Nitohy hatrany ny fikarohana ary fantatra fa mpiasa iray tao amin’ilay karana ihany no mpanome vaovao an’ireo olon-dratsy. Nosamborina avy hatrany io ary notadiavina ireo jiolahy nanao ny asa ratsy. Ny 30 jona 2019 no tratra teny amin’ny trano fonenany teto an-drenivohitra ny iray voalohany ary ity farany avy eo no nahafahana nisambotra ireo namany efatra hafa izay samy teto an-drenivohitra avokoa. Misy ny efa mpamerin-keloka amin’izy ireo ary mbola voarohirohy sy voahenjika amin’ny resaka fanafihana mitam-piadiana. Rehefa natolotra ny fitsarana moa izy ireto dia nidoboka eny Tsiafahy avokoa.